Mareykanka oo ka digay in loo safro dalal ay Iswiidhan ka mid tahay | Somaliska
Wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanka, ayaa digniin ay maalintii shalay aheyd ay soo saartay, waxaa ay ka digtay in dalal ay Iswiidhan ka mid tahay loo safro xilliga fasaxyada kuleeylaha.
Digniintan ayaa lugu sheegay in dalalkaasi yihiin dalal u dhago nugul weeraro ay ka fuliyaan kooxaha argagaxisadda ah. Digniintan oo maalintii shalay aheyd la soo saaray, ayaa looga digayaa muwaadiiniinta Mareykanka ineey u socdaalaan qaaradda Yurub xilliga fasaxa kuleeyaha ee fooda innagu soo haya, sida ay wakaaladda wararka Rueters shaacisay. Dalalka ay ka mid Faransiiska, Ruush-ka iyo Iswiidhan ayaa lugu yiri digniintaasi, “waxaa dhawaan ka dhacay falal argagaxiso”.
Digniintan sidoo kale ayaa imaaneeysa xilli koox la baxday Al Quaida ay shaacisay ineey weeraro argagaxiso ka fulin doonaan qaaradda Yurub. Suuqyada laga adeegto, goobaha dalxiiska iwm ayaa digniintu sheegtay in la lala yimaado feejignaan dheeri ah, maxaa yeelay baa lugu yir digniinta waa goobaha la bartilmaameedsado.
Ma ahan markii ugu horeeysay oo Mareykanku digniin noocaan oo kale ah ka soo saaro inaan loo safrin qaaradda Yurub. Kol hore ayey wasaaradda arrimaha dibada Mareykanka ay soo saareen digniin la xirriira socdaaladda lugu tago qaaradda Yurub, hase ahaateen sheekadda xiisaha leh ayaa ah in Iswiidhan ay ka mid tahay dalalkaasi la sheegay in argagaxisadu beegsaneeyso.